Nanjary feno Bar fisotroan-toaka ny tanàna (tsy latsaky ny 8 izao no isany eo amin’ny elanelana 25 m monja) ka mitabataba lalandava ary mitarika tsy filaminana eny an-toerana. Lasa amin’ny 6 ora maraina dia efa ahitana fanendahana miseho any anelakela-trano rehetra any. Tsy voahaja intsony ny lalàna misy milaza fa tsy azo hivarotana toaka 150 m manodidina ny fiangonana sy sekoly fianarana eny an-toerana. Manampy trotraka an’izany ny fanorenana gaboraraka misy eny an-toerana toy ny fananganana andrin-trano anaty arabe sy ny fanaovana gabone mivantana anaty dalle ao aminy. Etsy an-kilan’izay, ao anatin’ny tsena Roland Garros etsy am-pita koa dia ahitana trano fisotroan-toaka tsy nahazoana alalana tsy latsaky ny 4 be izao ka mahatonga ny tsy filaminan’ny fiainam-bahoaka ihany koa. Tairina, araka izany, ny sain’ny tompon’andraikitry ny filaminana eto amintsika sy ry zareo ao amin’ny CUA mba hanara-maso akaiky ny zava-misy manodidina an’io tsena kaominalin’Ambohijatovo io.